मुख धुँदा यी ५ गल्ती गर्नुहुन्छ ? आउनसक्छ डण्डीफोर र दाग – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/मुख धुँदा यी ५ गल्ती गर्नुहुन्छ ? आउनसक्छ डण्डीफोर र दाग
गल्तीः खासमा भन्ने हो भने, अनुहार धुँदा साबुनको प्रयोग गर्नु राम्रो होइन। फेरि सबै साबुन एकै किसिमका पनि हुँदैनन्।अधिकांश साबुनमा हाम्रो छालामा रहेका फाइदाजनक ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने खालका रसायनहरू मिसाइएका हुन्छन्, जसले गर्दा मुहारको छालामा एलर्जी हुने, चिलाउने, फुस्रो हुने समस्या देखा पर्दछ।गर्ने के तः त्यसैले मुख धुँदा सफा पानीले मात्रै धुनु उचित हुन्छ। यदि साबुन नै प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एण्टिब्याक्टेरियल साबुनको मात्रै प्रयोग गर्नुपर्दछ।
गल्तीः ठीकै छ ल, मुख धुँदा सबै विधि पुर्याएर धुनुभयो, अब तपाईँले गर्ने गल्ती भनेको के हो थाहा छ ? फोहोर तौलियाले अनुहार पुछ्ने !बरु नपुछ्नुस्, त्यत्तिकै सुक्न दिनुस्, तर फोहोर लुगाले पुछ्ने काम नगर्नुहोस्। ल त्यो पनि ठीकै छ, तौलिया सफा नै छ, अब अधिकांशले के गर्छन् भन्दा तौलियाले जथाभावी अनुहारमा रगड्न थाल्छन्। के सिसा पुछेको हो र ?
गल्तीः विशेष गरी जाडो मौसममा मानिसहरू चिसो पानी छुन डराउँछन्। अनि नुहाउँदा, मुख धुँदा तातो-मनतातो पानीको प्रयोग गर्छन्।तर उनीहरूले यो विचार गर्दैनन् कि, तातो पानीले अनुहारको चिल्लोपना हटाउँदछ र राम्रा ब्याक्टेरियाहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ, जसले गर्दा अनुहार फुस्रो हुने, एलर्जी हुने हुन्छ।गर्ने के तः सकेसम्म चिसो अनि सफा पानीले नै अनुहार पखाल्नु आवश्यक हुन्छ। यदि अत्ति नै जाडो भएमा धेरै तातो होइन, हलुका मनतातो बनाएर धुनुपर्दछ।
गल्तीः चिनी थोरै भए मिठो हुँदैन भने धेरै भए तितो हुन्छ। मुख धुने काम पनि यस्तै हो। अधिकांशले विहान उठेर मुख धुन्छन् अनि दिनभरी काम गरेर बेलुका मुख धुन बिर्सन्छन्। फेरि कोहि-कोहि यस्ता पनि हुन्छन्, जसलाई घण्टै पिच्छे मुख धोइराख्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवै काम फिटिक्कै गर्नुहुँदैन।गर्ने के तः राति सुत्दा सिरानी अथवा सिरकबाट अनुहारमा लागेको फोहोरमैलालाई त विहान धोइन्छ। अनि दिनभरी धुँवा धूलोमा हिँडेपछि पनि त अनुहारमा फोहोर टाँस्सिएको हुन्छ।त्यसैले बेलुकी पनि एकचोटि अनुहार धुनु अनिवार्य हुन्छ। तर धेरै चोटि मुख धोइराख्नु पनि नराम्रो बानी हो। अत्ति नै भएमा, दिउँसो एकचोटि धुँदा पनि केहि फरक पर्दैन।